We.com.mm - ကျိုက်ထီးရိုးရောက်ရင် ကေဘယ်လ်ကားကို စီးဖြစ်အောင်စီးပါ
ကျိုက်ထီးရိုးရောက်ရင် ကေဘယ်လ်ကားကို စီးဖြစ်အောင်စီးပါ
ကျိုက်ထီးရိုးရောက်ရင် cable car စီးဖြစ်အောင် စီးပေးကြပါ။ကျိုက်ထီးရိုး တောင်တက်ရင် တောင်တက်ကားနဲ့ ရသေ့တောင်အထိတက်ပါ..ရသေ့တောင်မှာဆင်းမှာလို့ ကားသမားကိုကြိုပြောထားပါ။
ရသေ့တောင်ဂိတ်ကနေ နည်းနည်းလေးလမ်းလျှောက်လိုက်တာနဲ့ ကေဗယ်ကားဂိတ်ကိုရောက်ပါတယ်။
ကိုယ်ကတောင်ပေါ်မှာအိပ် မှာဆိုရင် အတက်တခြမ်းလက်မှတ်ဖြတ်ပါ။ နေ့ချင်းပြန်ဆိုရင် အသွားအပြန်တခါထဲလက်မှတ်ဖြတ်ထားပါ..ညနေ ၆နာရီခွဲအထိ ကေဗယ်ကားစီးလို့ရပါတယ်။
အသွားသက်သက်အပြန်သက်သက် လက်မှတ်ဝယ်ရင် တခြမ်းကို ၄၀၀၀ကျပ်ပါ။ အသွားအပြန်လက်မှတ်ဝယ်ရင် ၆၀၀၀ကျပ်ပါ။ သက်သာသွားတာပေါ့။ ကေဗယ်ကားစီးရမှာမကြောက်ပါနဲ့။ စီးလို့တည်ငြိမ်တယ်။ တောင့်တင်းပါတယ်။ တောင်တက်ကားစီးတာထက် လူအရမ်းသက်သာပါတယ်။ အဆင့်အတန်းရှိရှိ သွားလာရတာ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာတက်ပါတယ်။
ကျမတို့အပြန်မှာ ကေဗယ်စီးပြီး ရသေ့တောင် ကားဂိတ်မှာ ကင်ပွန်းစခန်းထိ ကားပြန်စီးရပါတယ်။ တောင်ဆင်းကားဂိတ်ထိ ကေဗယ်ကားဂိတ်က သူတို့ကားနဲ့လိုက်ပို့ပါတယ်။.
အပြန်တောင်ဆင်းကားမှာကျမတို့ မိသါးစုခေါင်းခန်းစီးပြီး ပြန်ဆင်းလာပါတယ်။ ခေါင်းခန်းမှာစီးရင်း ကားသမားကိုသိချင်တာလေး တွေမေးမိပါတယ်။. ကင်ပွန်းစခန်းမှာ ကေဗယ်ကားဂိတ် လက်မှတ်ရုံလေး မရှိတဲ့အကြောင်းလည်း ကျမတို့က ပြောမိပါတယ်။.
အသွားတုန်းက ရသေ့တောင်ရောက်ရင် ကေဗယ်စီးမယ်ဆိုပြီး ရသေ့တောင်ဂိတ်မှာ ဆင်းမယ်ပြောထားတာ မနက် ၄နာရီကျော်လောက် မှောင်မှောင်မည်းမည်းနဲ့ ဘယ်ရောက်မှန်းမသိ လိုက်ခင် ရင်ပြင်တော်ဂိတ်ကို တောင်တက်ကားက ရောက်နေပါပြီ။ စိတ်ထဲဇဝေဇဝါဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတွေတိုးကြိတ်နေတာနဲ့ ဘာမှပြောမနေတော့ပါဘူး။
စိတ်ထဲမှာတော့ တောင်တက်ကားနဲ့ cable car ပြသနာတော့ရှိနေပြီဆိုပြီး ရိပ်မိလိုက်ပါတယ်။
အပြန် ကားဂိတ်နားမှာလည်း cableကားမှ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်က hand speaker လေးနဲ့ ဆိုင်တန်းနားချောင်ကပ်ပြီး လူခေါ်နေတာတွေ့ပါတယ်။
cableစီးလို့ရပါတယ်။ promotion 3+1ရှိပါတယ်တို့ပြောနေပါတယ်။ စိတ်ထဲ တမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်။ .marketingတောင် companyကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့မဆင်းရဲတဲ့အခြေအနေကို ကျမ ကောင်းစွာသဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်။
စိတ်ထဲမကောင်းဖြစ်မိတယ်။ ကျမတို့မြန်မာတွေဟာ လက်ကမ်းကြိုတတ်တဲ့ ဓလေ့ပျောက်ဆုံးနေခဲ့တာကြာခဲ့ပြီထင်ပါတယ်။
အများနဲ့တစ်ယောက်အခြေအနေမျိုးကို cable car company ကြုံနေရတာသေချာနေပါပြီ။ ဒါကြောင့် တောင်တက်ကားမောင်းတဲ့ကားသမားကို မေးပါတယ်။အစ်ပါတယ်။ အဖြေသေချာထွက်လာပါပြီ။
cable car companyက ရသေ့တောင်ရှိ ကေဗယ်ကားဂိတ်ထိ ကားပြေးဆွဲဘို့ ကား ၅၀ တောင်းဆိုညှိနှိုင်းပါတယ်။ တောင်တက်ကားအသင်းက လုံးဝမပေးဘို့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။
အကြောင်းပြချက်ပေးပါတယ်။ လက်ရှိ ကား၁၅၀နဲ့ ကျိုက်ထီးရိုး ဧည့်သည်တွေ အတွက်လုံလောက်ပါတယ်တဲ့။
နောက်တစ်ခုသိလိုက်ရတာက ကားသမားတွေရဲ့ mindset ပါ။.အဲဒါက…. “””””ဒီတောင်တက်လမ်းက ကျနော်တို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လမ်း သူတို့နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ။ သူတို့ကားတွေပြေးမယ်ဆို သူတို့လမ်းသစ်ဖောက် လေ။ ကျနော်တို့က ကေဗယ်ပြုတ်အောင်တိုက်ထုတ်မှာ။ ကေဗယ်ပြုတ်သွားအောင်လုပ်မှာ။
ဒီဇင်ဘာ၂၇ထဲက ကျတော်တို့ကားတွေကို ကေဗယ်ကားဂိတ်ထိဧည့်သည်တွေမပို့ဘို့ ပိတ်လိုက်ပြီ။ သူတို့က ဧည့်သည်လာပို့ပေးတဲ့ကားသမားတွေကို ကော်မရှင်ပေးတယ်။တစ်ချို့ ကားသမားတွေကသွားချင်ကြတယ်။ ဒါကြောင့် ပိတ်လိုက်တာ။……””””””…တဲ့လေ။
ဒါကြောင့် ကျမတို့တောင်အတက်မှာတုန်းက ရသေ့တောင်ဂိတ်တောင်မဝင်ဘဲ တန်းတက်တာကိုး ကျမတို့လို ကလေးပါတဲ့မိသားစုတွေလည်း cableစီးမယ်ပြောထားပြီး မှောင်မှောင်မဲမဲမှာဘုမသိ ဘမသိရင်ပြင်တော်ဂိတ်ကိုရောက်ခဲ့ကြရတာပဲ။ အဲ့ဒီညီမဆို ခရီးကပန်း အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ ကေဗယ်ကဘယ်မှာစီးရမှာလဲလို့ လိုက်မေးနေသေးတာ။…
ခရီးသွားဧည့်သည်တွေ အဆင်ပြေရေးကို ဦးစားမပေးဘဲ ကိုယ်ကျိုးသာကြည့်ကြတာဟာ မလုပ်သင့်တဲ့လုပ်ရပ်ပါ။ တစ်သက်လုံးလည်းလုပ်စားလာကြတာ ချမ်းသာနေကြပြီ။
ကိုယ့်ထဲက နည်းနည်းခွဲပေးဘို့ကို ရန်သူတွေ့သလို အသည်းအသန် မာန်တွေထည့် ပြုတ်အောင်တိုက်ဘို့အထိလုပ်ကိုင်ဘို့ကြိုးစား လာကြတာ ရှက်စရာကောင်းလွန်းနေပါပြီ။
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေတောင် ကျမတိုနိုင်ငံထက်အများကြီး အဆင့်အတန်းမြင့်မြင့်နေထိုင်နေကြပါပြီ။
နိမ့်ကျတဲ့ပုံရိပ်တွေနဲ့ အများကြီးနောက်ကျ ကျန်ရစ်ခဲ့ရတဲ့ ကျမတို့ပြည်သူတွေဟာ အဆင့်အတန်းရှိရှိ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ နေထိုင်ချင်ကြပါပြီ။
အခုလို ကိုယ့်နိုင်ငံပုံရိပ်တင့်တယ်လာဘို့၊ ပြည်သူတွေ အဆင့်အတန်းရှိရှိ နေထိုင်သွားလာ နိုင်ဘို့ကိုလက်ကမ်းကြိုဆိုရမယ့်အစား ဝေမျှသုံးစွဲဘို့ကို
သဘောထားမကြီးနိုင်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ဆို ဒီနိုင်ငံဟာ နိမ့်ကျတဲ့အနေအထားတွေက ရုန်းထွက်နိုင်ပါ့မလား။
ကျမတို့ပြည်သူတွေ ပင်ပန်းလှပါပြီ။ အဆင်းရဲဆုံး နိုင်ငံမှာနေ အချို့ငဲ့ဆုံး လူစဉ်မမှီတဲ့ လူနေမှုပုံစံတွေနဲ့ ဖြစ်သလိုသွား ကြုံသလိုစား ရှက်စရာတွေကို ရှက်စရာလို့မမြင်တတ်တေါ့အောင် နိမ့်ကျခဲ့ပြီးပါပြီ။
အခုချိန်မှာ အဆိုးရွားဆုံးအနေအထားတွေက ရုန်းထွက်ဘို့ကြိုးစားနေကြချိန်မှာ နိုင်ငံကြီးသားပီသတဲ့ သဘောထားကြီးသော စိတ်ကိုမွေးမြူကြဘို့ အမြင်ကျယ် အတွေးချဲ့ကြဘို့ အချိန်တန်ပါပြီ။
ကျမတို့ပြည်သူတွေဟာ အဆင့်အတန်းမြင့်မြင့် လူ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ ရပ်တည်နေထိုင်ဘို့ ထိုက်တန်တဲ့သူတွေပါ။ ကျမတို့ပြောင်းလဲချင်ပါပြီ။ cable carစီးခဲ့တာလေး ပြောပြပါအုံးမယ်။ ေ
တာင်အတက်မှာ မစီးခဲ့ရတော့ အပြန်မှာ အတက်အဆင်းလက်မှတ်ဖြတ်လို့ ကျမတို့တော့ အတက်အဆင်းစီးပြီးရင်းစီးလိုက် တယ်။ ကလေးတွေကပျော်လို့ သူတို့ချည်း သက်သက်တစ်စီးစီးကြတယ်။
တစ်ယောက်တစ်စီးစီစီးကြတယ်။ ကေဗယ်ပေါ်ကရှုခင်းတွေကြည့်ရတာ အရမ်းလှပါတယ်။ ညနေစောင်းချိန်ဆို ပိုလို့လှပါတယ်။
တောင်တက်ကားစီးရတာအရမ်းပင်ပန်းပါတယ်။ မပြောင်းမလဲတိုးကျိတ်လုတက်ရတာ အရင်အခြေအနေအတိုင်းပါပဲ။ ကိုယ်ကဘယ်လောက်တန်းစီထား ကားလာထိုးတာနဲ့ ဘယ်လိုဘယ်လို အောက်ကနေခုန်တက်လာမှန်းမသိတဲ့ လူတွေနဲ့ထိုင်ဖို့နေရာလုရပြန်ပါတယ်။
ကားလူပြည့်လည်း ချက်ချင်းမထွက်သေးဘဲ ကားပေါ်မှာ ခရီးကပန်း လူကနွမ်းနဲ့ ကျပ်ပိတ်သိပ် ပြီးစောင့်ရတာ အတော်ဒုက္ခများတာပါ။ ဒီတော့ကျိုက်ထီးရိုးတောင်တက်ကားအခြေအနေ အရင်အတိုင်းပါပဲ။ ပိုကောင်းလာတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။
ကျမအလုပ်က ကျိုက်ထီးရိုးတောင်တက်ကားနဲ့ အတော်ကြာကြာလုပ်ကိုင်ခဲ့ရတာ စီမံခန့်ခွဲခဲ့ရတာ အချိန်ကာလတစ်ခုအထိပါပဲ။ ဘယ်လိုပဲ စီစဉ်စီစဉ် စည်းကမ်းအားနည်းတဲ့ လူတွေကြောင့် အမြဲစကားတွေပြော စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းခဲ့ကြရတာပါ။
တောင်တက်ကားသမားတွေကလည်း ကျမတို့နဲ့ ဆိုကြားပေါက်မရလို့ ပညာကပေးချင်ကြသေးတာမို့ နောက်ပိုင်းသူတို့ကိုပါ အောက်ဆိုဒ်သဘောမျိုးပေးရပါတယ်။
ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားနဲ့အနီးအနားဒေသခံတစ်ချိုု့ဆို ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားကြီးက သူတို့ကို လုပ်ကျွေးနေသယောင် ထင်မှတ်ထားတာမို့ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်ကဧည့်သည်တွေအပေါ် ဆက်ဆံပုံတွေက ပြူးပြဲငွေရှာနေဟန် အထင်းသားပေါ်လွင်နေတာပါ။
ဘုရားဖူးဧည့်သည်တွေ သက်တောင့်သက်သာ အဆင်ပြေအေးချမ်းစွာ ဘုရားဖူးနိုင်တဲ့ လုပ်ပုံကိုင်ပုံမျိုးနဲ့ စီးပွားရှာကြရင် အားလုံးအဆင်ပြေမှာပါ။
ဘုရားပေါ်က အလှုခံတွေကလည်း အရင်လောက်မဆိုးပေမယ့် အရင်အချိုးအတိုင်းပါပဲ။ ရွှေနန်းကျင်နန်းရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ဒီနေရာကစ ဘုရားကန်တော့ရတယ်ဆိုပြီး လူကိုအတင်းကြီးကာ အတင်းတွန်းထည့်တော့တာပါပဲ။
မုဆိုးတောင်သွားလည်း လူကိုရှေ့ကပိတ် နောက်တစ်ယောက်က ကျောကိုတွန်းပြီး ဒီမှာ ကန့်တော့သွားဆိုပြီး လုပ်တုန်းပါပဲ။ အရင်ကလောက်မဆိုးတာ အပြောအဆိုလေးပါပဲ။
ဘုရားရိပ်သိပ်အေးချမ်းပါတယ်။ ညနေစောင်းနေဝင်ချိန် လုံးတော်ပြည့် ရွှေသင်္ကန်း တွေနဲ့ ဝင်းလတ်နေတဲ့ ကျိုက်ထီးရိုး ဆံတော်ရှင်မြတ်ဟာ အလွန်အင်မတန် ကြည်ညိုသပ္ပါယ်စရာကောင်းလှပါတယ်။
ထီးတော်က ဆည်းလည်းလေးတွေက လေအခတ်မှာ တချွန်ချွန်မြည်နေတာ စိတ်မှန်းနဲ့ခံစားကြည့်ရင် ငြိမ်သက်အေးချမ်းလို့ တကယ့်ကို ကြည်နူးစရာပါ။ တန်ခိုးကြီးလွန်းလို့ အိမ်နီးချင်းထိုင်းတွေ အများဆုံးလာရောက်ဖူးမျော်ကြသလို
ကမ္ဘာအဝှမ်းက နိုင်ငံခြားသားတွေလည်း လာဖူးမျော်ကြတာမို့ အဆင့်အတန်းမြင့်မြင့် ဧည့်ခံနိုင်မှသာ ကျမတို့ မြန်မာ့ပုံရိပ်မြင့်တက်လာမှာ မဟုတ်လား။ကျမတို့ ပြင်ကြရအောင်။ ကောင်းသောပြုပြင်ခြင်းနဲ့ နိုင်ငံ့ပုံရိပ်မြှင့်တင်ကြရအောင်။
Credit - Original Writer
( Original Writer ကို credit ပေးပါသည်။ စာထဲတွင်ပါဝင်သည့်အတိုင်း ညစ်ထေးသော mindset တစ်ခုကို ပြင်ဆင်ရန် သင့်ပြီဟုလည်း ယူဆမိပါသည်။ )
ကွင်းထဲမှာဂိုးပေါက်ပျောက်နေပေမယ့် ကွင်းပြင်မှာ ( ၆ ) ပတ်တည်းနဲ့ မိန်းမ ( ၃ ) ယောက်ကို ကလေး ( ၃ ) ယောက်မွေးစေခဲ့သူ
ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ဖြစ်ဖို့အထိ ဆန္ဒရှိနေပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်အရွေးခံခဲ့သူ ကော်မတီဝင်လူငယ်လေး
လကုန်တဲ့နေ့ထိ ပိုက်ဆံမပြတ်သွားအောင် ဒီအချက်သုံးချက်ပဲဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုတယ်
Dryer မှုတ်ချိန်မှာ ပြုလုပ်မိလေ့ရှိတဲ့ ဆံသားပျက်စီးစေတဲ့ အမှားများ
ချေးငွေပြန်မဆပ်နိုင်လို့ အမျိုးသားတစ်ဦး ကြိုးဆွဲချသေဆုံး
ပါကစ္စတန်လေယာဉ် ( ၁ ) စီးပျက်ကျပြီး အိန္ဒိယလေယာဉ် ( ၂ ) စီးဆုံးရှုံး၊ အိန္ဒိယပိုင်းလော့တစ်ဦးဖမ်းခံရ
ရွှေထူး နဲ့ ရွှေမှုန်ရတီ တို့ရဲ့ Dating နောက်ကွယ်က ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ လျို့ဝှက်ချက်တစ်ခု
3 years ago by Mizzy Reba
ရန်ဖြစ်ရာမှ ဒေါသဖြစ်ကာ ခွေးနဲ့ကြောင်ကို (၂၁)ထပ်တိုက်ပေါ်မှပစ်ချတဲ့သူ
သင်ရဲ့ထိုးမြဲလက်မှတ်က ပြောတဲ့ သင့်အကြောင်း
World of the Married ကနေသင်ယူနိုင်တဲ့ relationship ဆိုင်ရာသင်ခန်းစာ ( ၆ ) ခု
10 months ago by Phone Khant Kyaw
တောင်ကိုရီးယားတွင် ပလစ်စတစ်ဆာဂျရီလုပ်ရာမှ နာမည်ကျော် Bossini လုပ်ငန်းစု၏ ဆက်ခံသူ သေဆုံး